Apple manova ny tompon'andraikitra amin'ny tetik'asa kintana amin'ny fahitalavitra Apple | Avy amin'ny mac aho
Ilay mpamorona ny lozisialy fahitalavitra Apple, andian-dahatsoratra misy an'i Jennifer Aniston sy Reese Witherspoon, dia nandao ilay tetikasa noho ny fahasamihafana nisy teo amin'ny famoronana. Toa tsy ny zava-drehetra no mandeha matanjaka ho an'ny tetikasan'ny fahitalavitra an'i Apple, izay kely no fantatra.
Fantatsika amin'ny alàlan'ny magazine Variety izay nanondro izany Jay Carson dia nandao ilay tetikasa ary ny mpitantana azy vaovao dia ny veteranina Kerry Ehrin. Ny mpandimby dia manasongadina ny asa farany natao ho mpanatanteraka mpanatontosa ny andiany voatendry ho an'ny Emmy "Bates Motel."
Carson dia efa teo aloha nanara-maso ary niara-niasa ho mpanolotsaina politika tamin'ny andiany "House of Cards". Mifanohitra amin'izany, Kerry Ehrin dia tsy namorona tetikasa talohan'ny nanakaramana an'i Apple.
Mifandraika amin'ny andiany Apple, ny fomba fiasa vaovao hapetrak'ilay andiany miaraka amin'ny lalana vaovao dia tsy fantatra. Hatreto dia fantatra fa novokarin'ireo mpamokatra ny mpilalao sarimihetsika roa tonta ary mifototra amin'ny tantara nosoratan'i Brian Stelter. Vanim-potoana roa amin'ity andiany ity dia voalahatra miaraka amin'ny toko 10 avy. Tsy fantatra ny fotoana hanaovana ny sary sy ny datin'ny fandefasana ilay fizarana.
Mandrak'izao fantatsika fa ny fiandohan'ny fandefasana ny fandaharana amin'ny fahitalavitra Apple, na dia efa voalahatra ho an'ny volana martsa 2019 aza. Ireo consultants nokaramain'i Apple dia nanolotra ireo daty ireo na dia efa vonona ny atiny ho an'ny Noely teo aloha aza. Tombanana ho 1.000 XNUMX tapitrisa no natokan'ny Apple ho an'ny tetikasa fandefasana atiny ary manana fandraisana anjaran'ireo mpitantana manan-danja avy amin'i Sony, izay isan'izany , hatramin'ny volana jona lasa teo.
Tao anatin'ny fotoana vitsy lasa izay, Apple dia tokony nanakarama an'i Kristen Wiig mba hanao andian-tantara mahatsikaiky. Toa ny tetikasa tokana vita dia ny Amazing Stories, miorina amin'ny andiany iray nataon'i Steven Spielberg.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple dia nanova ny lohan'ny tetikasan'ny fahitalavitra Apple